कुनै समय कङ्गाल भइसकेका अमिताभ कसरी बने बलिउडकै धनी? - Everest Dainik - News from Nepal
कुनै समय कङ्गाल भइसकेका अमिताभ कसरी बने बलिउडकै धनी?
अमिताभ बच्चनलाई बलिउडमा मेगास्टार भनेर चिनिन्छ । कुनै समय हिन्दी चलचित्र उद्योगमा उनको एकछत्र राज हुने गर्थ्यो । त्यसताका बलिउडका कलाकारहरूमा दोस्रो स्थानका लागि मात्र होड हुने गर्थ्यो किनभने अमिताभको नम्बर एकको कुर्सीलाई हल्लाउने क्षमता कसौमा थिएन । तिनै अमिताभ आफ्नो एउटा महत्वाकांक्षी योजनाका कारण टाटा पल्टिएको अवस्थामा पुगेका थिए ।
हाल अमिताभसँग चालिस करोड डलर जति रहेको छ । यो लगभग ४६अर्ब हुन आउँछ । उनी बलिउडका धनी व्यक्तिमा पर्छन् र प्रत्येक वर्ष फिल्म, टेलिभिजन र विज्ञापनबाट करोडौँको आम्दानी गर्ने गरेका छन् । तर यी अमिताभ आफ्नो क्यारिअरको एउटा मोडमा कंगाल हुने अवस्थामा पुगेका थिए ।
अमिताभलाई १९८२ मा कुली चलचित्रको सेटमा चोट लागेको थियो । त्यस बेला जिउनु मरनुको दोसांधमा रहेका उनी २००५ मा त्यही घाउ बल्झिएर अझै सिकिस्त भए र उनको शल्यक्रिया समेत गरियो । सन २००० मा उनको आर्थिक अवस्था निकै तन्नम भएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस बलिउड अभिनेत्री महिमा चौधरी भन्छिन्, ‘म गोर्खाली हुँ, मलाई तितौरा मनपर्छ’
उनले निकै ठुलो महत्वाकांक्षा लिएर १९९५ मा स्थापना गरेको कम्पनी अमिताभ बच्चन कर्पोरेसन लिमिटेड -एबीसीएल टाट पल्टिएपछि अमिताभ सडकमा आउनु पर्ने अवस्था आयो । एबीसीएल हलिउड शैलीको मनोरंजन कम्पनीको रूपमा स्थापना गरिएको थियो । यस कम्पनीले १९९६ को ‘मिस वर्ड’ भारतमा आयोजना गरेर रातारात चर्चा बटुल्न सक्यो ।
त्यसका साथै यस कम्पनीले एकै फिल्मको संगीत वितरण, चलचित्र निर्माण, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट जस्ता क्षेत्रमा हात हालेको थियो। तर हतार हतारमा फैलिने क्रममा यस कम्पनीले व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेन र केही दिनपछि नै यसमा समस्या हरू देखा पर्न थाले।
विस्तार हुने क्रममा यस कम्पनीले एक सय ५० जना विशेषज्ञलाई काममा लगायो र तीन देखि आठ करोड बजेटका १५ सिनेमा निर्माण गर्ने काम सुरु गऱ्यो। त्यसका साथै यस कम्पनीले बम्बे र ब्याण्डिट क्वीन जस्ता चलचित्रको वितरण अधिकार समेत लियो। यी दुवै फिल्मले सफलता हात पारे। यसका साथै कम्पनीले तेरे मेरे सपने, रक्षक र दिलजले जस्ता फिल्म निर्माण समेत गऱ्यो ।
याे पनि पढ्नुस अमिताभको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ, डिस्चार्ज हुँदै
तर १९९९ सम्म आउँदा आउँदा एबीसीएलसमू थुप्रै चुनौती आइलागे। कम्पनीले चलचित्र निर्माण र वितरणका लागि समयमै पैसा तिर्न नसक्दा त्यहाँ कार्यरत म्कर्म्चारीले तलब समेत खान नपाउने स्थिति आयो। केही दिनमै कम्पनी टाट पल्टिएको घोषणा भयो।
उक्त समय कम्पनीको ऋण तिर्न अमिताभले आफ्नो घर र अन्य सम्पत्ति बेच्न खोजे तर अदालतले उनले कुनै पनि समप्त्ति बेच्न नपाइने फैसला सुनायो। त्यस बेला अमिताभले च्घल्चित्र्मा अभिनय गर्न छोडिसकेका थिए।
केही दिन अमिताभ निकै छटपटीमा बाँचे। तर उनले त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हार मानेनन् र कम्पनीको ऋण तिर्न आफैं जुर्मुराए। उनले फिल्मबाट सन्यास लिइसकेको घोषणा गरेका हुन्दाले उनीकहाँ आफैं काम आउने सम्भावना निकै कम थियो। त्यसैले उनी आफैं काम खोज्न थाले र ५८ वर्ष पुगिसकेका उनलाई यशराज चोपडाले मोहब्बतेंमा काम दिए। त्यस फिल्ममा अमिताभले उत्कृष्ट सहायक अभिनेताको फिल्म फेयर पुरस्कार जिते।
याे पनि पढ्नुस अमिताभ बच्चन तीन दिनदेखि अस्पतालमै, किन पुर्याइयो बिहानै तीन बजे अस्पताल ?
यसको लगत्तै उनले प्रसिद्ध ब्रिटिश टेलिभिजन क्विज सो ‘हु वान्ट्स टु बी ए मिलेनिअर’को हिन्दी संस्करण ‘कौन बनेगा करोडपति’ संचालन गर्ने अवसर पाए । यसपछि उनल पछाडि फर्केर हेर्नु परेन । करोडपतिले अमिताभको लोकप्रियतालाई घर घरसम्म पुऱ्याइ दियो ।
उनको लोकप्रियताको अनुमान यसैबाट लगाउन सकिन्छ कि इस कार्यक्रमको तेस्रो सिजनमा शाहरुख खानलाई कार्यक्रम संचालनको जिम्मा दिए, तर दर्शकहरूले यो मन पराएनन् । त्यसपछि निर्माणपक्ष फेरि अमिताभकहाँ आउन बाध्य भयो ।
यतिमात्र होइन करोडपतिकै प्रारूपमा गोविन्दा, सलमान खान र मनोज वाजपेयीले पनि क्विज सो चलाए तर कसैले पनि अपेक्षित सफलता हात पार्न सकेनन् ।
हाल अमिताभले एबीसीएल कम्पनीको ८० करोडको ऋण तिरिसकेका छन् र उनले अभिनय गरेका चलचित्र आज पनि त्यत्तिकै सफल रहने गरेका छन्। उनले हालैमात्र एउटा ट्वीटमार्फत आफ्नो सम्पत्ति आफ्ना छोरा छोरीमा बराबर बाँडिने बताएका छन्।
ट्याग्स: अमिताभ बच्चन, बलिउड